नेकपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘भनाभन’ नै भएपछि बुधबारको बैठकमा नआउने बताएका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्।
आज दिउँसो पुनः बैठक बस्ने गरी मंगलबार सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो। बैठकको औचित्य नरहेको भन्दै ओलीले बैठकमा उपस्थित नहुने बताएको केही नेताले सार्वजनिक गरेका थिए।
यहीकारण पनि बुधबारको बैठकमा अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे ओलीले आफूनिकट नेताहरुसँग छलफलमा जुटेका हुन्। केही नेतालाई बालुवाटार बोलाएर तथा केही नेतासँग टेलिफोनमै छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हिजो बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप भएपछि ओलीले बुधवारको बैठकमा उपस्थित नहुने बताएका थिए। ओली उपस्थित नभए पनि आजको बैठक अघि बढाउने दाहाल पक्षको तयारी छ।
मंगलबार भएको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्कपकमल दाहाल प्रचण्डबीच बाझाबाझको अवस्था सृजना भएको र अरु नेताले पनि प्रचण्डको पक्ष लिएपछि ओली अफ्ठ्यारोमा परेका छन्। त्यही अफ्ठ्यारो बढेपछि उनी बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुनुको अर्थ छैन भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
‘बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री जानुहुन्न। कार्य व्यस्तताका कारण बैठकमा बस्न नसक्ने जानकारी दिइसक्नु भएको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने।
मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले बैठक शुरु गर्दै पेश भएका दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छलफल अगाड बढ्ने बताएलगत्तै ओलीले प्रचण्डको लाञ्चनापत्रमा छलफल नहुने भन्द हस्तक्षप गरेका थिए।
तर ओलीको यो शैलीप्रति अरु नेताले आपत्ति जनाउँदै बैठकमा आएका दुबै प्रतिवेदनमा छलफल हुने अडान लिएका थिए। त्यसलगत्तै ओली प्रतिरक्षात्मक बनेकाले बुधबारको बैठकमा आफू नआउने जनाउ दिएका थिए। कार्तिक २८ मा अध्यक्ष प्रचण्ड र मंसिर १३ मा ओलीले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने नगर्ने मै नेताहरुबीच भनाभनको अवस्था आएको थियो।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रचण्डबाट एजेण्डा सुनेपछि बोलेका ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई लाञ्छनापत्र भन्दै फिर्ता भएमात्रै छलफल गर्न आफू तयार हुने बताएका थिए।
उनले भने, ‘लाञ्छना पत्र फिर्ता हुनुपर्छ, म त्यो लाञ्छना पत्र मान्दै मान्दिन र त्यसमा छलफल पनि हुन सक्दैन।बहुमत, अल्पमत र कमिटी पनि मान्दिन। तपाइहरुले पार्टी फुटाइसक्नुभएको छ, अब के को पार्टी एकता ? यो के को प्रस्ताव हो ? तपाइँहरुले लगाएका आरोपहरुको मैले जवाफ दिइसकेको छु। अब त्यसमा फेरि छलफल किन गर्ने यो हुनै सक्दैन।’
ओलीले यस्तो भनेपछि प्रचण्डसहितका बहुमत नेताले भने बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रचण्डले भने ओलीलाई आफूहरुलाई उत्तेजित पार्न खोजेपनि उत्तेजित नहुने भन्दै भन्नुभएको थियो, ‘कमरेड उत्तेजित नहुनुस् प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भइसक्यो।’ तर प्रचण्डको भनाइ प्रतिवाद गर्दै ओलीले ‘कसरी छलफल हुनसक्छ ?’ भन्नुभएपछि अरु नेताले प्रचण्डका पक्षमा बोलेका थिए।
नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव कमिटीमा पेश भएर छलफलमा गइसकेको बताएका थिए। रामबहादुर थापा, इश्वर पोखरेलले पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।